Ogwe ụzọ Nkwụsịtụ Akpaaka China Manufacturers & Suppliers & Factory
Ogwe ụzọ Nkwụsịtụ Akpaaka - onye na-emepụta ihe, ụlọ ọrụ, onye na-ebu si China
(Total 24 Ngwaahịa maka Ogwe ụzọ Nkwụsịtụ Akpaaka)
PVC na-akpaghị aka na-emechi ọnụ ụzọ na Galvanized Frame
PVC na-akpaghị aka na-emechi ọnụ ụzọ na Galvanized Frame Ụlọ ọrụ Hongfa pụrụ iche na ọnụ ụzọ dị elu, ọnụ ụzọ dị elu, ụlọ ọrụ mmepụta ihe, ọnụ ụzọ ngwa ngwa & ụdị ọnụ ụzọ ọzọ. Ọnụ ụzọ dị elu, ọnụ ụzọ Rapid Roller nwere ike ịrụ ọrụ site na Radar & Loop sensor na usoro iwu ndị ọzọ. Ọnụ ụzọ dị elu, Okporo ụzọ dị...
Akpanaka akpaaka Galvanized Roller Shutter Door 1. Ogwe a na-ekpuchi ihe a na-ekpuchi na-eme ka ọkpụkpụ na-ekpo ọkụ. 2. Ọkpụkpọ windo a na-agbanwe agbanwe dị iche na ụdị mpempe akwụkwọ na-agagharị agagharị maka ihe onwunwe na nkwụsị. New opening shutter nwere ike igbochi irradiation siri ike na mgbakwunye ụda. 3. Ịgba...
Ogwe ụzọ Nkwụsịtụ Akpaaka Ogwe ụzọ nkwụsịtụ akpaaka Ogwe ụzọ mgbochi ịpịaka Okporo ụzọ kristal akpaaka Ogwe ọnụ ụzọ nkwụsị na-adọkpụ na-agba ọsọ Akpa ụzọ ụzọ ụgbọ ala Sistem Ọnụ Ụzọ Ntugharị Akpaaka Ogwe ụzọ mpempe akwụkwọ mpempe akwụkwọ na-agbagha